Jirkeennu muxuu la kulmaa inta lagu jiro Ramadaanka (Warbixin xiiso leh). | Raadreeb
Jirkeennu muxuu la kulmaa inta lagu jiro Ramadaanka (Warbixin xiiso leh).
May 27, 2017 | Filed under: Articles,Wararka | Posted by: Ducaysane143
Jirkeennu muxuu la kulmaa inta lagu jiro Ramadaanka (Warbixin xiiso leh)
Waxaa inoo biloday 10 kii cisho ee ugu horreeyey bisha Barakaysan ee Ramadaan, waxaan mowduucan oo ka mid ah qormooyinkii Tusmada Nolasha uga hadli doonaa waxyaabo cajiib ah oo jirkeennu uu la darso inta aynnu soomannahay.
Heerka 1-aad: (Maalinta 1 aad & 2-aad)
Maalinta ugu horreysa Ramadaanka waxaa hoos u dhaca heerka Sonkorta jirka, waxaa yaraada gaabiska wadnaha iyo cadaadiska dhiigga. Murqaha waxaa ka baxa Glycogen taasi oo keeni karta in ay tabaryareeyaan.
Mowjadaha nadiifinta jirka ee Ramadaan waxaa lagu tiriyaa kuwa ugu xun Madax-xanuun, dayaan ama wareer, neef ur, iyo carabka oo dahaar wayn uu fuulo waa calaamadaha lagu garto nadiifinta jirka ee Ramadaanka, waxaa ugu daran xilligan baahida ama gaajada.
Heerka 2-aad: (Maalinta 3-aad ilaa 7-aad)
Xayrta jirka, tan isku badashay dufanka ayaa burburta taasi oo sii daysa waxa loo yaqaan glycerol ka imaanaysa gliceride iyo Moleekuleyaasha ayaa isku badala glucose. Maqaarku wuxuu noqon karaa mid saliid leh, maadama Saliid badan laga nadiifiyey jirka. Dadka maqaarkoodu uu yahay xasaasiga waxaa laga yaabaa inay maalmo isku arkaan nabaro jirka ama ka soo bax.
Jirku wuu isla qabsadaa si deg deg ah, habka dheefshiidkuna wuxuu awoodaa in uu keeno qaadashada nasiinadii loo baahnaa isagoo la qabsanaya helitaanka nadaafadda uu helay iyo bogsiinta.
Waxaa kobca wareega dhiigga cad iyo habka difaaca oo isaguna kordha, waxaa laga yaabaa in aad dareento xannuun xagga sababadda ah, waxaana taasi u sabab ah nadiifinta xubnaha jirka oo ay ka mid yihiin sambabbada ay la qabsanayaan dib isu habayn.
Waxaa badiyaa dhacda in Neeftu ay wali urto carabkuna ku dahaaran yihiin walax ka dhalanaysa haraadka, haddana waxaa caafimaad hela xiidmaha yar iyo kan wayn, maadama saxarada darbiyada xiidmaha yar ku sameysanta ay baaba’ayso.
Heerka 3-aad: (Maalinta 8-aad ilaa 15-aad)
Qofku wuxuu helaa awood tamareed, maskax-furan nadiif ah, laakiin haddana waxaa dhici karta in dhaawacyadii hore ee is-hagaajintii jirka ay keeni karto waxoogaa xanuun ah, taasi waxaa ugu wacan awoodda korortey ee jirku uu ula qabsaday Soonka, tusaale ahaan haddii aad ka jabtey gacan 10 sano ka hor waxaa meeshii jabtey agagaaraheeda lagu arki karaa calaamado yar yar taasi oo keenta in qofku uu xoq-xoqo. Xanuunkaasi wuxuu u fiican yahay jirka maadama uu ku jiro xaalad uu dib isagu saxayo.
Murqaha ayaa noqda kuwa dhagan isla markaana xanuun dareemaan taasi oo ay ugu wacan tahay sun cun-cunka, Lugaha ayaa ah meelaha ugu daran.
Afka waxaa lagu arkaa nabaro yar yar oo koronkoro ah oo qaarkood cad cad yihiin waxaana ugu wacan jeermiga afka, waxaa u daawo ah nadiifin joogto ah oo loo adeegsado biyo cusbo leh oo lagu luq-luqdo laguna xoqo meelaha nabaradan ka soo baxaan.
Heerka 4-aad: (maalinta 16-aad ilaa 30-aad)
Jirku wuxuu si buuxda ula qabsadaa Soonka, wuxuu qofku helaa tabar iyo furfurnaan maskaxeed, maalmahaas waxaa caraf noqota neefta qofka iyadoo midabka carabkuna uu dib u soo laabto.
Waxaa kororta xusuusta qofka, iyadoo jirku uu helo is badal hagaagsan oo ku yimaada habka dheefshiidka, waxaa isu dheelitirma miisaanka iyo jirka, waxaa nadiif noqda dhamaan tuubooyinka dhiigga, wareegga dhiiga ayaa dib isu habeeya, waxaa qofka ka baxa wasaqdii jirka ku kaydsaneyd.
SUBXAANALLAHA bal eeg faa’idooyinkan jireed, caafimaad iyo maskax ee qofku ka helo Soonka oo haddana lagu daray abaalmarinta ALLE xagiisa u jirta qofka Sooman aduun iyo aakhiro, waxay intan oo dhan inoo muujinayaan muhiimada Ramadaanka.
Illaha xigashada mowduuca:
Hay’adda caafimaadka Britain NHS
Buuga Ramadan & Diabetes Care ee ay qoreen Abdul Hamid Zargar & Sanjay Kalr.
Daraasada lagu magacaabo Caafimaadka & Soonka ee uu diyaariyey
Fereidoun Azizi, MD oo ah agaasimaha qaybta cilmi barista Jaamacada Shahid, Beheshti University of Medical Sciences ee dalka Iiraan.
Daraasad kale oo diyaariyey Isbitaalka Isbitaalka Boqor Faysal ee dalka Sacuudiga taasi oo lagu daabacay jariirada Annals of Saudi Medicine oo Isbitaalkaasi soo saaro.
W/Q: Mowliid Xaaji Cabdi.